Ulawulo loMgangatho | Iimveliso ze-Hebei Da Shang Wire Mesh Co, Ltd.
Siyakholelwa ukuba "ilaphu locingo olulungileyo liyakwazi ukuthetha kwaye umnatha ngamnye kufanelekile". Sicinga ukuba uhlalutyo lweziqulatho zeekhemikhali, iipropathi ezibonakalayo kunye nolawulo lokunyamezelana zibalulekile kwaye zinceda ilaphu lethu locingo ukubonisa ukusebenza kwabo kakuhle ekusebenzeni komthengi nakwiimeko ezinzima zokusebenza.
I-DASHANG inenkqubo yokuvavanya ngokungqongqo izinto ezingafunekiyo malunga nokwenziwa kweekhemikhali kunye neepropathi zomzimba.
Ngale spectrometer (iSpectro yaseJamani) sivavanya ukwenziwa kweekhemikhali kwezinto zokwenza imveliso (umxholo weCr kunye neNi) ukuba ziyahlangabezana nemigangatho yamanye amazwe.
Emva kovavanyo oluphambili, izinto ezingenayo ezingenanto ziya kuthunyelwa kumasifundisane wokuzoba ucingo. Inkqubo yokuzoba iya kumiswa de kube ubukhulu becingo buzotywe kubungakanani obufunwayo bokuluka.
Xa sifumana izinto zokwenza imveliso, siza kuvavanya umxholo wekhabhoni kunye nesalfure yentsimbi engenazingcingo ukuqinisekisa ukuba umxholo wayo wekhabhoni kunye nesalfure uhlangabezana nemigangatho kunye neemfuno zomgangatho.
Xa uvavanyo olukhankanywe apha ngasentla lugqityiwe, siza kuthatha esinye isiqwenga sesampulu kuvavanyo lokuqina. Isampulu iya kubekwa phakathi kwenxalenye yokutsala kunye nenxalenye yokubamba yomvavanyi wovavanyo lokuqina ukuze kukhangelwe ukuba amandla oqinileyo emveliso afanelekile.
Inayo iyunithi encinci ye-0.002mm. Ngokulinganisa ngokuchanekileyo, uphando kunye nophuhliso lwezemali zinokuxhaswa, ngelixa inkqubo yemveliso inokulawulwa kwaye ilungelelaniswe kwangexesha, ethembisayo ukuhluza umnatha ohambelana neemfuno zomsebenzisi. Ukongeza, ilahleko yokusetyenziswa inokuncitshiswa, ngenxa yoko kuncitshiswe indleko zemveliso.
Ngaphambi kokuluka, amagcisa ethu aya kujonga ukuba oomatshini bokuluka i-CNC basetiwe kwaye basebenze ngokuchanekileyo.
Ngexesha lokusebenza kwetyala, abasebenzi bethu be-QC baya kujonga ukuba imeko yemveliso iyahambelana na neemfuno ezihambelanayo.